Hadda waxaad isku dayi kartaa MGSE Ubuntu | Laga soo bilaabo Linux
Waxaad hadda isku dayi kartaa MGSE Ubuntu
Laga soo bilaabo WebUpd8 saaxiibkeen Andrew wuxuu na siinayaa tilmaamaha si aan u isticmaalno qaar ka mid ah fiilooyinka ka kooban MGSE kordhinta cusub waayo, Gnome-Shell oo ay wiilasha Linux Mint, waxay isku dayi doonaan inay iswaafajiyaan khibrada Gnome 2.
Kordhinta waxaa si rasmi ah loogala soo bixi karaa Github, laakiin Andrew ayaa ku daray isaga PPA loogu talagalay dadka isticmaala Ubuntu. Tallaabooyinka rakibaadda waa kuwan:
Marka la rakibo, dib u buuxi GNOME Shell oo dhaqaajiso kordhinta adoo adeegsanaya GNOME Tool Tweak.
1 Ku rakibida Buugga
2 Mawduuc cusub.
Ku rakibida Buugga
Haddii aan rabno inaan ku dhejino kordhinta gacanta, tusaale ahaan qaybinta kala duwan, waa inaan ka helnaa faylka Git, fure qoraalka "tijaabo" oo tirtir hadaan rabno kordhinta aanan rabin inaan rakibo. Ugu dambeyntiina, waxaan wadnaa qoraalka
Andrew ayaa sidoo kale iftiiminaya Linux Mint 12 waxaa ku jiri doona mawduuc cusub oo loogu talagalay Gnome-Shell ku saleysan Zukitwo, taas oo aan kari karno halkan ka hel ama waan ka heli karnaa Deviantart. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale iyada oo loo marayo PPA waan rakibi karnaa Zukitwo:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Waxaad hadda isku dayi kartaa MGSE Ubuntu
Markii aan Fedora u isticmaalayay Gnome-shell, waxaan ku daray qaar ka mid ah kordhinta (menu-ka codsiyada, meelihii meelihii, qeybta hoose) sababo la xiriira caadeysiga isticmaalka gnome 2 (iyo intii aan la qabsan jiray la-hadalka qolofta cusub). Runtuna waxay tahay in natiijooyinka ay ahaayeen kuwo qanciya.
Iyada oo la adeegsanayo MSGE hubaal way fududaan doontaa waxayna muujinaysaa guusha fidinta Gnome-shell. Waqti yar gudahood, taasi waxay ka dhigi doontaa qolofkaas mid ka mid ah kuwa ugu qaabeynta badan.
Ugu dambeyntiina, waqtigaas waxaan kuu sheegay in aan hubo in Mint uusan awoodin in uu sii haysto gnome 2 muddo dheer, iyada oo la siinayo horumarka salkeeda ubuntera (oo leh gnome 3) iyo Gnome lafteeda. Mint waxay ku sharadaysay inay keento isticmaaleyaasha aan faraxsanayn (si dhakhso leh) ugu dhowaanshaha Unity iyo Gnome-shell, MGSE waxay isku dayeysaa inay badbaadiso yoolkaas iyadoo ogaatay dhibaatada ku haysashada Gnome 2. Si kastaba ha noqotee, LMDE waxaan ku arki doonnaa gnome 2 muddo dheer.
Waxaan u maleynayaa diidmada Gnome3 inay aad ula mid tahay wixii ka dhacay sii deynta KDE4, bini'aadamka guud ahaan wuu ka cagajiidayaa isbedelada xagjirka ah, waxaan u maleynayaa inay tahay waqti waqti in lala qabsado isbeddelada.
Ii sheeg in aan aad ugu qanacsanahay KDE hada yaa ii sheegi lahaa? Hahahaha .. By the way Oscar, waad sii riyootaa hahaha
HAHAHAHAHA, waan soo toosay, waxaan kuu sheegayaa inaan haysto Gnome oo qayb kale ah iyo KDE kale, kan dambe oo kaliya boggan furan ayaa i cunaya 482 Mb, haddii kale wehelkaagu noloshaada kama dhigayo mid murugo leh inaad u wareegto KDE mise weli wuu sii socdaa Isaga oo is cunaya Archkiisa, hehehehehe, waxaan u maleynayaa in qoob-ka-ciyaarka Debian lagu calaamadeeyay wejigiisa hahahahaha.
Weli waxaan rakibayaa Arch + KDE, dhibaatadu waxay tahay in ISP-geena (laga soo bilaabo elav iyo I) uu noo diidayo inaan kala soo baxno waxyaabaha u dhexeeya 8AM iyo 6PM, marka waxaan rajeynayaa inaan soo dejiyo 70MBs oo aan u baahanahay
Markii aan dhammeeyo rakibidda waxaan hage ka sameyn doonaa HAHA
Kdebase? Ka tag Kde oo dhameystiran, wax badan ayey qaadan doontaa
Hadda adduunkani wuu waashay, waashay! Adiga oo isticmaalaya Ubuntu iyo elav KDE, waxaan wajahaynaa wadar la'aan fowdo, qosol ama oohin? ...
YYYEAAAHHH !!! Waxaan horey u rakibay Arch + KDE, waxaan isku dayayay inaan rakibo 3 maalmood guul la'aan, kadib waxaan sameyn doonaa qoraal sharxaya wixii dhacay, iyo mid kale oo sharraxaya sidaan u xaliyay 😀
Sikastaba, waxaan horeyba usameeyay Archkeyga aan jeclahay, waxaanan bartay laba ama seddex waxyaalood oo cusub 🙂
Fiiri waxa hooyadaa kuu sheegtay: Ku rakib Debian Alejandrito, Debian ..
Waxaan horeyba uxiray Archkeyga aan jeclahay, waxaanan bartay laba ama saddex waxyaalood oo cusub
Waxaan u maleynayaa sidaas, waxaad baratay sida dhaqso loogu rakibo nidaamka.
Oscar, waad sii riyooneysaa ..
U ooya ama u safr Cuba si aad u rogto digaag laga bilaabo 15
KZKG ^ Gaara, hambalyo, waxaan rajaynayaa inaad ka tanaasusho rakibida grub2, ha ilaawin casharro lagu hagaajinayo KDE, elav wuxuu sheegay inuu maanta daabici doono mid, waan sugayaa.
Kan casharka samaynayaa waa aniga 😉
Waan qorayaa 😀
Waxaad ii sheegaysaa inaad tahay ventriloquist, hahahahaha.
Horaan u dhajiyay. Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto 😀
Tijaabinta KDE ee Imtixaanka Debian
WTF? Commodore 64 oo leh Core i7 iyo Linux Mint